Indlela ukubhala isicelo selivu ngaphansi komthetho?
Ngaphambi ohlela isikhathi sakho sokungcebeleka, kubalulekile ukuba ningabi nje kuphela cabanga ukuchitha lapho, kodwa ungakhohlwa sesenza izivumelwano ne ikhanda. Kungcono efakwa idumela womqashi kusengaphambili, njengoba kukhona kungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi izinhlelo zakho ngobugebengu. Ngokwesibonelo, umqondisi angase anqume ukuba achibiyele esimisweni amaholide. Ngakho ungazivikela, kufanele ngokushesha ngangokunokwenzeka ukubhala isicelo selivu. Indlela ukubhala isicelo ukushiya nalokho acabangele, ungafunda ku.
Isicelo ikhefu okulotshwe ifomu khulula. Phakathi sokuphumula sonyaka ngokuvumelana Labor Ikhodi umsebenzi uzoqhubeka nesikhundla sakhe kanye nomholo isilinganiso.
Njengoba wazi, shiya kufanele banikwe umsebenzi njalo ngonyaka. Nokho, isikhathi sokuphumula ibalwa ngesisekelo isinqumo womuntu ukusebenza usuku, kunokuba ekuqaleni konyaka wekhalenda.
Indlela ukubhala isicelo uhambo lwakho? Okokuqala, singatlolwa bunjesi ngesandla, futhi ifomu, okuyinto yakhelwe ibhizinisi. Le dokhumenti ngeke aqukethe imininingwane efanayo kanye nezinye isicelo womuntu. okungukuthi:
uya khona (ubani isitatimende sibhekiswe);
umthumeli (ie, owenza isicelo);
ngqo umbhalo ngokwawo, ecacisa kwesikhathi sokuthatha ikhefu ;
uma isikhungo inikeza affixing visa, futhi ifakwa.
Ingabe ngidinga benika isizathu?
Uma umsebenzi udinga ukuya eholidini ayikho isheduli sivunyiwe, futhi ngaphambili noma, kungenjalo, kamuva, kanjani ukubhala isicelo selivu Kulezo zimo? Kulesi simo, isisebenzi ubhala isicelo evamile futhi ayikwazi ukucacisa izizathu okuyinto icela isikhathi ukuphumula, ayesephambuka isheduli sivunyiwe. Uma isicelo esinjalo isisebenzi avumela ubuholi, umthetho ngeke i-. Lapho ebhalela oda isitatimende enjalo kusukela umsebenzi, nayiSigungu isiginesha umqondisi, futhi ziyoba isisekelo ngokunginika ikhefu.
Ezinye izinhlangano bebelokhu ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bathole iholidi yonyaka kuphela uhlelo, futhi ukuphoqa majeure, bangakwazi afune abasebenzi wenze isitatimende ekhethekile. Indlela ukubhala leli phepha ukuze bangabhekani? Gcwalisa-ke kulula kakhulu - umane ucacise isizathu, ngenxa lapho umsebenzi efisa ukudlulisa iholide.
Uma umqashi uyazicabangela abonisa isizathu isisebenzi ezinhle ke shiya usuku siyoshintshwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona ezinye izigaba nokungaba yisibalo esingamaphesenti ayishumi ngaphansi komthetho angaya eholidini at ngokuphelele noma nini, futhi umqondisi alinalo ilungelo wayiziba lokhu.
Lokhu, ikakhulukazi, abesifazane phambi isimemezelo noma ngokushesha ngemuva, futhi ngemva "break" zinakekelwe ingane. Omama abaningi abalindele nakho nesithakazelo omunye umbuzo: kanjani ukubhala isitatimende ku sokubeletha? Lesi sitatimende kungabuye abhalwe kunoma yiluphi uhlobo ngesandla. Kunemininingwane ephelele yezizathu ngokunginika kuyoba ucezu sokukhubazeka yesikhashana.
Okunye izigaba okukhethekile of abasebenzi.
Njengoba ubona, uma wazi imithetho eyisisekelo-Code Labour, umbuzo kanjani ukubhala isicelo selivu, ngeke abangele nobunzima kakhulu.
Nokuqoqwa kwezikweletu ka ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso
I upokisi smear? Zingaki izinsuku ukufezekisa upokisi. I smear upokisi kodwa zelenki
Kanjani "Maynkraft" issushitelya futhi kanjani ukulwa naye?
Comedy ukuze niyiyiza izinyembezi: amafilimu Russian wokubuka
Green Nature Diamond Hotel 5 * (Marmaris, Turkey): abahambi Izibuyekezo